सुरक्षित रूपमा क्लेब्रुल्टोल कच्चा माल खरीद गर्नुहोस् | AASraw कच्चा पाउडर
/ब्लग/Clenbuterol/सुरक्षित रूपमा क्लेनब्रुलोल कच्चा सामग्री खरीद गर्नुहोस्
प्रकाशित 11 / 19 / 2017 by Dr. Patrick Young मा लेखियो Clenbuterol. यो संग4टिप्पणिहरु.
-के हो Clenbuterol कच्चा माल
-क्लेब्रोटोलल प्रभाव र क्लिनब्रोल्टोल साइड-प्रभाव
-कसरी Clenbuterol कच्चा माल खरीद अनलाइन सुरक्षित
- क्लेब्रुर्वोल कच्चा माल के हो?
Clenbuterol यसको हाइड्रोक्लोराइड नुनमा उपलब्ध छ क्लेनब्रूरोपोल हाइड्रोक्लोराइड पाउडर (clenbuterol एचसीएल पाउडर)। यो सेतो पाउडरको रूपमा हो, जुन यसको उत्साहकर्ताहरूमा थपिएको कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा 68 घण्टाको सक्रिय जीवन छ र 36-39 घण्टाको आधा-जीवन छ। मानव शरीरमा यसको शक्ति अपेक्षाकृत लामो छ र यही कारणले गर्दा क्लेन खुसी विनियमितमा क्रमशः वृद्धि निर्धारित छ। Clenbuterol एचसीएल कच्चा माल शुद्धता संग 98% भन्दा कम बेचेको छ, र 2years को अधिकतम स्थिरता संग। जब इन्जेटेड गरिन्छ, यसको बारे मा 95% मानव शरीर मा सजिलै संग अवशोषित हुन्छ।
Clenbuterol एचएलसी कच्चे माल को समीक्षा:
नाम: Clenbuterol एचसीएल, Clenbuterol हाइड्रोक्लोराइड, क्लेन
कैस न 21898-19-1
आणविक सूत्र: C12H19CI3N2O
Clenbuterol Melt प्वाइंट: 174-175.5 ℃
भण्डारण अस्थायी .:2-8 ℃
-क्लेबर्टोलल प्रभाव र क्लिनेब्रोल्टोल साइड-प्रभाव
Clenbuterol एचसीएल एक ब्रोंडोडाइटर हो। यसलाई मौलिक रूपमा श्वसन रोगको उपचारका लागि अस्थमा जस्तै डिजाइन गरिएको थियो। तर क्लेब्रुल्टोल बडिबिल्डरहरूको बीचमा धेरै प्रसिद्ध छ, किनभने यसले वजन घटाउँछ र मांसपेशिहरु सुधार गर्न सहयोग गर्दछ। क्लनले फाइदा उठाउन सक्ने व्यक्तिहरूले फाइदा उठाउँछन्। Clenbuterol मुख्यतया हृदय दर र तापमान बढ्छ, यसैले चयापचय स्तर बढ्दै जान्छ कि वजन गुमाउँछ। क्लेबर्टोलल एक दोहोर्याउने एजेन्सी जस्तै काम गर्दछ र यसैले शरीर निर्माणकर्ताहरू जस्तै क्लेनब्रोल्टोल प्रयोग गर्ने।
यो clenbuterol को साइड इफेक्ट जो देखाइन्छ मांसपेशियों को पीडा छ, र अन्य खतरनाक, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, र मतली र उठी पल्स हुन्।
- कसरी सफा अनलाइन क्लेब्रुर्वोल कच्चा माल खरीद गर्न को लागी
तिमी सक्छौ खरिद यसका लागि धेरैजसो साइटहरु छन्। यदि तपाईले तपाईलाई सामना गर्नु भएको छ भने तपाईले तपाईलाई सामना गर्नुहोला स्वास्थ्य खतरा थाहा पाउनु पर्छ यदि तपाईं क्लेबुलोलोल आहार औषधी किन्नु पर्छ पोषणको विस्तार हुनु पर्छ। आहार र लगातार व्यायाम। तपाईं आफ्नो चिकित्सक संग छलफल गर्न मनमा राख्नु पर्छ त्यसैले यसैले कुनै साइड इफेक्ट स्वास्थ्यको स्थायी चोटमा जान्छ। यस औषधिले छोटो अवधिमा छ महिना महिनाको चक्रलाई जोगाउन सुरक्षित गर्न अनिवार्य छ। तपाइँले वेबसाइटको साथ अर्डर बुक गर्नुभएपछि तपाइँले क्लेनब्र्युल्टोललाई अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईं clenbuterol कच्चा माल अनलाइन खरीद, तपाईं म्युजियम शुद्धता खतरा ज्ञात हुन सक्नु हुन्छ मा तपाइँलाई तथ्य गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले पहिचान गर्नु पर्छ यो जीनियस क्लेब्रुल्टोल कच्चे माल शुद्धता संग 98 भन्दा कम छैन, न केवल केहि जस्तै जस्तै, जस्तै Salbutamol/ albuterol (सीएएस नम्बर 18559-94-9) .तपाईँले परीक्षणको लागि सानो अर्डर गर्न सक्दछ, वा तुलनाको लागि क्लेनब्रोल्टोल कच्चा माल र सालबुटोमोल / अलबुल्टोल कच्चा माल खरीद गर्नुहोस्। यदि clenbuterol कच्चा माल शुद्धता संग clenbuterol एचसीएल कच्चा माल आपूर्तिकर्ता विश्वास छ, उनि नमूना आदेश प्रदान वा दिमाग मा मनन गर्दैन सालबुटोमोल कच्चा माल तुलनाको लागि निःशुल्क नमूना।
ढुवानी विधि प्रयोग गरेर, तपाईं 1 हप्ता वा XNUM दिनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि देश कानुनले क्लेब्रोल्टोल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ भने, तपाइँ आफ्नो शरीरको अवस्था सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो औषधि मात्र प्रिन्ट मा मेडिकल स्टोर मा उपलब्ध छ तर ज्यादातर वेबसाइटहरु लाई यो दुनिया भर मा यो दबाइ पठाईएको छ। त्यसैले यदि तपाईं clenbuterol खरिद गर्न अनलाइन विधि छनौट गर्नुभयो भने, तपाइँ आवश्यक पर्ची उत्पादन गर्न चाहँदैनन्। Clenbuterol खरीद गर्न उत्तम र सरल तरिका इन्टरनेट हो। यदि तपाइँ अनलाइनलाई भेट्टाउनुहुन्छ भने, तपाईले धेरै ठूला वेबसाइटहरू हेर्नुहोस् जुन प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु बेच्दै हुनुहुन्छ। अधिकांश वेबसाइटहरूले तपाईंलाई कुनै पनि नुस्खा उत्पादन नगरी यो औषधि खरिद गर्न मद्दत गर्दछ। इन्टरनेटमा क्लेबर्ब्रोलोल किन्नुहोस् धेरै लाभहरू छन्।
क्नेबर्बल्टल कच्चा माल उपलब्ध गराउने धेरै वेबसाइटहरूले वेस्टर्न युनियन, म्यानग्राम, बिटकोइन, बैंक वायर जस्तै भुक्तानीका सबै प्रकारका मोडहरू स्वीकृत गर्छन्। तर यदि तपाईं क्लेब्रुल्टोल कच्चा पाउडर अनलाइन खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाईलाई निश्चित छ कि वेबसाइट वास्तविक छ वा होइन। यो यो पनि आवश्यक छ कि यो जाँच गर्न को लागी कि यो तपाइँ एक सुरक्षित लेनदेन प्रदान गर्दछ किनकी तपाईं आफ्नो जानकारी को पेशकश गरेर रहे हो। Condenider सबै तरिकाहरू र निर्णयहरू जस्तै जब तपाईं वेबसाइटबाट अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नुहुन्छ जब तपाईं clenbuterol किन्न चाहनुहुन्छ। तपाईंले विभिन्न साइटहरू बीचको लागत तुलना गर्न निश्चित हुनुपर्दछ र यसैले तपाईंले सर्वोत्तम सौदा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहा छ कि धेरै साइटहरु प्रदान गर्दै छन्। clenbuterol कच्चा माल उच्च सम्झौता खर्चमा।
सान्दर्भिक उत्पादनहरूको बारेमा थप विवरण,यहाँ क्लिक गर्न स्वागत छ.
टैग: clenbuterol एचसीएल सामाग्री खरीद, clenbuterol एचसीएल सामाग्री, Clenbuterol कच्चा
4 प्रतिक्रिया टिप्पणिहरु
Dr. Patrick Young06 / 24 / 2018 मा 8: 50 बजे
Clenbuterol किन्नका लागि AASraw छनौट सही निर्णय हो।
dorito06 / 23 / 2018 मा 8: 20 ए.सी.
म क्लेबल्टुलल अनलाइन खरीद गर्ने प्रयास गर्दैछु, यसको लागि एक सम्मानित स्रोत के हो?
Dr. Patrick Young06 / 21 / 2018 मा 8: 53 बजे
ठीक छ, विवरणहरू ईमेल द्वारा तपाईलाई पठाइएको छ
डारियो06 / 21 / 2018 मा 6: 37 ए.सी.
म शुद्ध एचएचडी क्लेनब्युरोल खरीद गर्न चाहन्छु। 1kg को मूल्य के हो?
म अर्जेन्टिना हुँ, शिपिंग सहित लागत खर्च गर्छु।
HGH खुराक: HGH उचित तरिका को खुराक को चयन कसरि गर्नुहोस? उच्च शुद्धता ओक्सान्राण्डोन (अनवर) पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि कच्चे पाउडर
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक on विश्वको शीर्ष 10 उत्तम बेचन वजन घटाने पाउडर पूरक